६५ वर्ष माथिकालाई कोरोना खोपः प्रधानमन्त्रीलाई सहज, वृद्धवृद्धा दुई घण्टासम्म लाइन ! :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
रिता लम्साल आईतबार, फागुन २३, २०७७, १८:५७:००
तस्बिर : निमेष जंग राई
काठमाडौं– आइतबार बिहान १० बजे त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको खोप केन्द्रमा वृद्धवृद्धा लठ्ठी टेकेर उभिएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो खोप केन्द्रमा आएर खोप लगाउने र दोस्रो प्राथमिकतामा परेकाहरुलाई खोप अभियान सुरु गर्ने तयारी हुँदै थियो।
प्रधानमन्त्री आउने भएकाले अस्पताल परिसर र खोप केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो।
प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी सहित स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतम र विभागका अन्य कर्मचारी तथा काठमाडौं महानगरका कर्मचारीहरु १० बजेअघि नै खोप केन्द्रमा पुगिसकेका थिए।
१० बजे खोप केन्द्रमा आइपुग्ने तय भएपनि प्रधानमन्त्री ओली साढे १० बजे मात्र आइपुगे।
प्रधानमन्त्री ओली गाडीबाट झर्ने वित्तिकै उनका सुरक्षाकर्मीले देव्रेहात समाएर सहारा दिए। प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक दिव्या सिंह शाह, अस्पतालका अन्य चिकित्सक तथा स्वास्थ्य सेवा विभाग र काठमाडौं महानगरबाट आएका टोली पनि प्रधानमन्त्रीको पछिपछि लागे।
खोप केन्द्रको आराम कक्षको छेउमा संचारकर्मीहरुको भिड थियो। संचारकर्मीलाई देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दाहिने हात हल्लाएर मुस्कुराउँदै खोप लगाउने कक्षभित्र प्रवेश गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले खोप लगाउने कक्षभित्र भने नेपाल टेलिभिजन बाहेकका मिडियालाई प्रवेशमा गर्न रोक लगाइयो।
प्रधानमन्त्री ओली खोप लगाएपछि करिव आधाघण्टा खोप कक्षभित्रै रहेको विशेष आराम कक्षमा बसे।
यता खोप केन्द्रको बाहिर रहेको खोप कार्ड वितरण स्थलमा भने वृद्धवृद्धाको भिड बढिसकेको थियो।
प्रधानमन्त्री आराम कक्षमा रहँदासम्म अन्य वृद्धवृद्धाका लागि खोप अभियान सुरु भएन।
खोप लगाउन उत्साहित हुँदै बिहान ९ बजेदेखि नै त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा पुगिसकेका ६५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाहरु भने बाहिर उभिँदा–उभिँदा थकित भइसकेका थिए।
‘खै कुनबेला लगाउन पाइन्छ खोप?’ खोप कार्ड वितरण स्थलमा लठ्ठी टेकेर उभिएका एक वृद्ध पुरुषले त्यही उभिएका सुरक्षाकर्मीलाई सोधे।
‘अहिले यतातिर नआउनुस्, खोप लगाउने बेला भएपछि बोलाउछौं’ ती सुरक्षाकर्मीले भने।
खोप कार्ड वितरण स्थलमा वृद्धवृद्धाको भिड थेग्न नर्सहरुलाई हम्मेहम्मे पर्‍यो।
‘२ घण्टा हुन लागिसक्यो उभिएको, खै कुनबेला लगाउन पाइन्छ ? धेरै बेर उभिएर घुँडा दुखिसक्यो’ धेरै समयदेखि उभिएका वृद्धवृद्धा आक्रोश मिश्रित स्वरमा एकैसाथ बोले।
खोप कार्ड वितरणमा खटिएका नर्सिङ स्टाफहरु आक्रोशित भिडलाई सम्झाउदै थिए।
बालुवाटारदेखि खोप लगाउन त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुगेकी ७६ वर्षीया तुलसा अधिकारीले २ घण्टादेखि खोप केन्द्रमा उभिएको बताइन्।
‘९ बजे नै खोप लगाउन आइपुगेँ, उता जानु, उता जानु मात्र भन्छन्, उभिँदा–उभिँदा गाह्रो भएको छ, तर के गर्नु सबै उभिएका छन्, प्रधानमन्त्रीलाई पहिला लगाएपछि मात्र हामीलाई लगाउन रे,’ अधिकारीले भनिन्, ‘कतिबेला पालो पाउने हो थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीले लगाएपछि त आउला नि पालो।’
खोप लगाएपछि आधाघण्टा अब्जरभेसनमा बसेपछि प्रधानमन्त्री ओली ११ बजे खोप केन्द्रबाट बाहिरिए।
प्रधानमन्त्री ओली निस्किएपछि मात्र ६५ वर्ष माथिका अन्य वृद्धवृद्धाहरुलाई खोप लगाउन थालियो।
खोप लगाउने कक्ष र आरामकक्ष व्यवस्थित भएपनि बाहिर खोप लगाउनुअघि खोप कार्ड वितरण गर्ने स्थानको व्यवस्थापन भने भद्रगोल नै थियो।
६५ वर्ष माथिका वृद्धवृद्धाहरु लठ्ठीको सहारामा बल्लतल्ल उभिएका थिए। २ घण्टा पालो कुरेर खोप लगाउन पाएका वृद्धवृद्धाहरुले खोप पाउदा खुसी लागेको भएपनि खोप लगाउनु अघि धेरै कष्ट सहनुपरेको गुनासो गरे।
पानीपोखरीकी चन्द लक्ष्मी श्रेष्ठले पनि १० बजे नै खोप केन्द्रमा आएको भएपनि एकघण्टापछि मात्र खोप लगाउन पाएको सुनाइन्।
खोप लगाएर आराम कक्षमा बसेकी उनले आफुले खोप लगाउन पाउदा खुसी लागेको भन्दै खोप केन्द्रसम्म आउन नसक्ने वृद्धवृद्धाहरुलाई पनि विशेष व्यवस्था गरी खोप दिनुपर्ने बताइन्।
‘१० बजे नै खोप लगाछन् भन्ने सुनेर आइहालें, तर प्रधानमन्त्री आउनुभएकाले धेरै समय कुर्नुपर्‍यो,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘जे भएपनि खोप लगाउन पाए, राम्रै भयो, यहाँ आउन नसक्नेहरुलाई पनि खोप लगाउने व्यवस्था गरिदिए अझै राम्रो हुन्थ्यो।’
श्रेष्ठ नजिकै खोप लगाएर आराम गरिरहेका एक वृद्ध पुरुषले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहेको खोप केन्द्र प्रधानमन्त्रीको लागि मात्र व्यवस्थापन गरेको र अन्य वृद्धवृद्धाका लागि कुनै व्यवस्थापन नभएको गुनासो गरे।
‘जो आउने भएपनि व्यवस्थापन त गर्नुपर्छ नि, प्रधानमन्त्रीको मात्र व्यवस्थापन गरेर हुन्छ ? जनताको व्यवस्थापन गर्नु पदैन ?,’ उनले भने, ‘म साढे ९ बजे आए, ११ बजे बल्ल लगाउन पाए, कतिजना त धेरैबेर कुर्नुपरेर फर्किए।’
खोप लगाउन पाएकोमा भने खुसी लागेको उनले सुनाए।
खोप लगाएर आराम कक्षमा बसेकी लाजिम्पाटकी गिता प्रधानले खोप लगाउन आफुलाई डर नलागेको बताइन्।
उनले खोप लगाउन डर मान्न नपर्ने र सबैले खोप लगाउनुपर्ने बताइन्। ‘खोप लगाउदा मलाई त डर लागेन, केही पनि हुदैन रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘कसैलाई डर लाग्छ भनेपनि डराउनु पर्दैन सबैले खोप लगाउदा हुन्छ।’
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल लगायत देशभरका विभिन्न खोप केन्द्रहरुमा आइतबारदेखि ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई खोप लगाउन सुरु गरिएको छ।
दोस्रो प्राथमिकतामा परेकाहरुलाई पहिलो चरणमा खोप लगाउने अभियानको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुले नै लिएका छन्। ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउन थालिएपनि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगायत कतिपय खोप केन्द्रमा ज्येष्ठ नागरिकको सहजताका लागि राम्रो व्यवस्थापन नभएको पाइएको छ। तुलनात्मक रुपमा वीर अस्पतालमा भने केही राम्रो व्यवस्थापन देखिन्थ्यो।
शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा पनि लामो लाइन थियो। ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरु लठ्ठी टेकेरै लाइनमा बसेका थिए। केही आफन्तहरुले भने आफू लाइनमा बसेर आफ्ना अभिभावकलाई बस्ने व्यवस्थापन गरेका थिए। तर धेरैस्थानमा भने ६५ वर्ष माथिका नागरिक लामो समय लाइनमा नै बस्न बाध्य थिए।
भरतपुर अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितकाे चाप बढ्दै १४ मिनेट पहिले
शनिबार काठमाडौंमा ४६ हजारले लगाए भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा ४३ मिनेट पहिले